Unxiba njani umtshato woSuku-Iingcebiso kumadoda aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Lusuku olukhethekileyo apho eyona nto iphambili kukuba kufuneka unxibe njani kwifomalwear, kwaye zonke iinkcukacha zibaliwe, ukusuka ehempe, ibhlukhwe kuye nakweyiphi na into ehamba nayo. Inkqubo engqongqo kufuneka ilandelwe Kwaye ukunxiba umtshato wosuku kungahluka ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka apho kubhiyozelwa khona.
Kuya kufuneka ubeke iliso ngaphandle kwiinkcukacha, kuba imitshato emininzi ayisabhiyozelwa usuku kwaye Kuya kufuneka ukhethe imodeli efanelekileyo kwimeko nganye. Singakhetha iisuti ezinesiqingatha-selokhwe apho ungazidibanisa nethayi kunye netayi yokugoba. Kwaye kwiindwendwe ezikhethekileyo ezinje ngabakhaphi, olu hlobo lwesuti kufuneka lube yingubo yentsasa, ukuba ingavunyelwa emtshatweni.
1 Ingcebiso yokuqala
2 Iingcebiso ezisisiseko
3 Khetha okona kulungileyo kwixesha ngalinye lonyaka
3.3 Iqhina kunye neqhina lokugoba
4 Izinto ezenziwayo
Kwimitshato emininzi, uhlobo lwempahla oluza kusetyenziswa kwitheko eliza kubhiyozelwa sele lichaziwe. Oko sele kukunika umda olungileyo ukuze ukwazi ukukhetha ngokuchanekileyo isuti yesuti ekufuneka uyikhethile. Ewe ngokunjalo, Isuti kufuneka ibe ntle, iyahambelana, kodwa ungaze uzame ukubengezela okanye ube mhle ngakumbi kunomyeni.
Kuya kufuneka ubaleke kwimibala esisiseko enjengomnyama nomhlophe kwaye kunjalo imibala eqaqambileyo. Ukusika okanye isitayile se-tuxedo ayizizo ezifanelekileyo. Ukuba ujonge ukuphinda isuti kwaye uyisuse ezantsi kwekhabhathi yakho ayisiyonto ilungileyo, kodwa ukuba awunayo enye indlela, unokukhetha ukwenza utshintsho oluncinci kwenye yezixhobo zayo.
Olu hlobo lweengcebiso luza njengesiseko somgaqo, isitayile esingesosikweni kodwa siphumelele ukuze zonke iinkcukacha zenze into yazo kwaye zifike ngexesha kwaye zingaziwa.
Iibhulukhwe kufuneka zisikwe ngqo, ezinye ziqokelelwe ngedolo esinqeni kwaye Akufuneki zigqithe kwi-instep.
Ihempe kufuneka zisoloko zinemikhono emide kwaye imikhono yakhe kufuneka ikrobe phakathi kwesiqingatha sesentimitha ngaphezulu kwebhatyi. Ikhola kufuneka inamathele ngaphezulu kwebhatyi. Kukho amadoda ahlala ekhetha ukukhetha umbala wehempe emhlophe, kuba ngumbala onika ukubonakala kobuhle, uhlala usefashonini kwaye wenza nayiphi na itayi ukuba ihambelane nayo. Ewe ngokunjalo, ihempe yayihlala i-ayiniwe kwaye ingenabala.
Ibhatyi kufuneka idibane nemvisiswano, ngaphandle kwemibimbi ngokulula, amagxa kufuneka abe namandla kwaye alungelelaniswe ngokugqibeleleyo kubungakanani bomntu.
Izixhobo kufuneka zihlaziyiwe, entsha kwaye apho ungaboni naluphi na uhlobo lokunxiba. Izihlangu zingumzekelo ocacileyo, kunye nethayi.
Inwele kunye nentshebe. Zizinye zezixhobo ezingafanelekanga ukuba zilahleke, onke amalungiselelo kufuneka aqwalaselwe, makuqatshelwe ukuba kubekho unonophelo olukhethekileyo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kufuneka ucacise ukutsha kwamacala kunye neenwele ezinokuphuma entanyeni.
Khetha okona kulungileyo kwixesha ngalinye lonyaka
Isuti ayinzima ukuyikhetha xa ujonga umbala wayo. Ngokukodwa ihlala ichanekile ngeethoni ezikhanyayo (ngwevu okanye luhlaza), cala okanye itan nangaphezulu ukuba zenzelwe imibhiyozo ehlotyeni okanye emtshatweni wosuku, kuba ziyimibala epholileyo.
Imitshato eyenzeka ngokuhlwa imibala egqwesileyo yile yeethoni ezimnyama, iinjongo zivela kumalahle amnyama, kumnyama okanye kumnyama ohlaza okwesibhakabhaka.
Ukuba iyafana nawe ehlotyeni kukho iisuti ezenziwe ngoboya obukhethekileyo ukuze zibuphefumle, kodwa ulumke ngamanye amalaphu kuba anokushwabana ngokulula. Ungabona inqaku elinomdla kakhulu malunga neesuti zelinen eli khonkco.
Zininzi iimilo kunye nezitayile zehempe, ezineekhola ezahlukeneyo kunye namalaphu aneendlela ezahlukeneyo. Ukukhetha iihempe ezinemibala ekhanyayo sesona siphakamiso silungileyo kunye nokukhetha emhlophe kukwenza ubethe uphawu ngesona siphakamiso silungileyo sokudibanisa nayo yonke into.
Amalaphu kufuneka aphefumle, Ukuba kunokwenzeka, yenziwe ngomqhaphu kwaye kufuneka uzame ukunqanda ezo ziqulethe amalaphu okwenziwa, ngakumbi ukuba umtshato usehlotyeni.
Iqhina kunye neqhina lokugoba
Zizincedisi ezingafanelekanga ukuba zilahleke, kuya kufuneka ukhethe oyithandayo. Imibala ekufuneka uyikhethile ziintsingiselo zetune kwaye ngokungqinelana neseti iphelaEzo zithelekisa imibala kodwa zilandela umgca wethoni enye ziya kuhamba kakuhle. Iqhina lihlala lifumaneka ngokufanelekileyo, nkqu nakwiisuti eziqhelekileyo.
Ubophelelo bezaphetha buya kuhamba njengoncediso olungcono kwimitshato ebhiyozelwa ebusuku, kodwa sele zilungiselelwe ukusetyenziswa kuwo nawuphi na umcimbi zinikwe iipateni kunye nemibala eyenziweyo. Iya kuhlala ihamba ngcono nge-tuxedos okanye imisila.
Ungalibali ukwenza umphelelisi ogqibeleleyo ezinye izihlangu ezintle, itshefu ehambelana neqhina lakho, iwotshi ebukekayo kunye neecufflinks zehempe yakho. Konke oku kuya kunika isitampu sakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Unxiba njani umtshato wosuku